Bruno Fernandes lambarkee ayuu u xiran doonaa Manchester United?, xilli la xaqiijiyey haddii uu ka mid noqonayo xiddigaha wajahaya Wolves – Gool FM
(Manchester) 31 Jan 2020. Saxiixa cusub ee kooxda Manchester United, Bruno Fernandes ayaa la shaaciyey lambarka uu u xiran doono kooxda ka arrimisa Old Traffrod & Haddii uu ka mid yahay shaxda ay kala hortagayaan kulanka Sabtida naadiga Wolves.
Laacibka kahdka dhexe ee reer Portugal ayaa dhammaystiray heshiiska uu ugu biiray Man United kaddib markii uu ka soo dhaqaaqay Sporting, waxaana uu kooxda reer England u xiran doonaa lambarka 18-aad.
Bruno Fernandes ayaa ku jiri doona shaxda kooxda Manchester United ee wajahaya habeen dambe naadiga Wolves, sida uu xaqiijiyey macallin Ole Gunnar Solskjaer.
Lama oga inuu ku soo bilaaban doono Bruno kulanka Wolves, laakiin waxaa lagu daraya liiska xiddigaha Man United ee diyaarka u ah in laga soo xulo shaxda garoonka ugu bilaabanaysa Man Utd.
“Isagu diyaar ayuu u yahay inuu ciyaaro, runtiina waa uu ku lug yeelan doonaa kulanka” ayuu Tababare Solskjaer u sheegay Suxufiyiinta.
“Waxa uu isagu ku jiri doonaa shaxda, aynu tababarka ka baxno maanta.”
“Dabcan maalmo yar oo xamaasad leh ayuu haystay, xitaa gabadhiisa yar ayaa saddexda sano jirsatay shalay oo ay dhalashadeeda ku beegnayd, sidaasi darteed ma aqaano inta uu ku lug yeelan doono kulanka, laakiin waxa uu ku jiraa shaxda.”